mardi, 06 octobre 2015 23:05
Fihoaram-pefin'ny mpitandro ny filaminana : Hentitra ny Praiminisitra
« Toy ny zanaka ao an-trano io, ka raha misy maditra na mihoa-pefy sy maditra dia tsy maintsy anarina » io no sarisarim-pitenenana naton’ny Praiminisitra ny jeneraly Ravelonarivo Jean rehefa nanontanian’ny mpanao gazety ny momba ny raharahan’ny tsy fandriampahalemana any amin’ny tapany atsimon’ny nosy. Raharaha roa lehibe no tena miseho any an-toerana ankehitriny, dia ny mahakasika ny fomba nanaraha-maso ny ombin’ny dépioté Mara Niarisy tany Ankazoabo. Teo ihany koa ny nisavana ny tranon’ny kolonely Rabe Jules izay noheverina fa mitahiry dahalo rain-dahiny tany Toliara saingy efa nezahina nalamina moa iny.
mardi, 06 octobre 2015 15:01
Antsirabe : Misedra olana ara-bola ny ekipa handisport
Hiatrika ny fifaninanam-pirenena izay hatao any Fianarantsoa ny 23 ka hatramin’ny 28 oktobra ho avy izao ny ekipan’ny Handisport Antsirabe eo amin’ny taranja Baskety sy ny tsipy kanetibe izay hisolotena an’i Vakinankaratra. Misedra olana nefa ireto ekipa ireto raha ny nambaran’i Daish Michel, mpikambana ao amin’ny klioba CBH na “Club Handisport du Bira”. Raha ny fanazavany dia olana ara-bola ho an’ireo mpilalao miisa 16 no sakana ho azy ireo. Tara mantsy ny fanasana nalefan’ny Federasiona misahana azy ireo ka sarotra no ahazoana mangataka fanampiana amin’ny malala-tanana. Marihina fa efa tompondakan’i Madagasikara ny CBH Zazavavy teo amin’ny taranja tsipy kanety be sy baskety ny taona 2014.
mardi, 06 octobre 2015 12:50
Mahajanga : Mpitsabo 400 no nifampizara traikefa
Notontosaina tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga, ny 01 sy 02 Oktobra 2015 ny Fihaonambe faha-efatra momba ny fampatoriana sy fameloman’aina. Nahatratra 400 irao mpitsabo isan-tsokajiny nandray anjara. Fampahafantarana ny voka-pikarohana mikasika fitsaboana ny rà sy ny lalan-drà, ny taovam-pisefoana, ny dona, ny fanaintainana, ny vokatry ny otrik’aretina sy ny fanapoizinana, ny fampatoriana, ary ny fahasalam’ny reny sy ny zaza. Izay no votoatin’izao fihaonambe izay nokarakarain’ny SARM na ny «Société d’Anesthésie et de Réanimation de Madagascar» izao.
mardi, 06 octobre 2015 12:10
Toamasina : Mivory voalohany ny Filankevitry ny tanàna
Nanao ny fivoriana voalohany ireo Mpanolotsain'ny Kaominina ambonivohitr'i Toamasina. Tonga tao avokoa izy 19 mianadahy, ka 08 avy amin’ny MAPAR, 05 an’ny TIM, 02 avy ny MTS sy ny HVM, ary 01 avy ny tsy miankina Mangalaza sy Samy Gasy. Niditra ho mpanolotsaina ireo kandida Ben'ny tanàna tsy lany ka i Dr Rakotomanana Gervais ho an'ny TIM, Belahy Paul ho an’ny ny MTS, Solofo Ginah ny Samy Gasy ary Dr Zara Hassanaly Patrick ny HVM. Tsy niditra kosa i Pr Mangalaza Eugène. Raha ny resaka mandeha dia mety hatao Ben'ny tanana lefitra ity.
mardi, 29 septembre 2015 14:29
“Fandraman’i Boeny tsara kalitao” : 1 000 tohotra alohan’ny taona 2016
Taorian’ny fandrafetana ny drafi-panarenana ny rojom-pihariana fandrama na tantely ao Boeny dia miditra amin’ny fitsidihina ifotony tsirairay ireo Vovonam-piompiana tantely telo tao anatin’ny faritra ireo mpampiofana sy tompon’andraikitry ny Faritra. Tanjona ny hahafahana mamantatra ny zava-bitan’ireo niditra ho mpiompy tantely, mijery ny lesoka sy ny vahaolana ary ny fanatsarana mba hitohizan’ny fiompiana ho maharitra.
dimanche, 27 septembre 2015 18:25
Betroka tanànan’ny kolikoly ?: Anaovana fanadihadiana ny Adjida Casmir
Nanaovan’ny "section de recherche" avy amin’ny zandary, tao Toliara, fanadihadiana ny faran’ny herinandro teo, izany hoe ny Zoma sy ny Asabotsy, momba ny raharaha nahafaty ny komanda Falihery tao Betroka sy ny manodidina ny fiparitahan’ny fitaova-piadiana any an-toerana ny adjida Casmir izay rahalahin’ny dépioté Randrianasolo Jean Nicolas.
vendredi, 25 septembre 2015 14:11
Razafindramana Clément Ceau Gilbert, mpiandry tsatokazo ny Fosa Juniors Fc
24 taona, mirefy 1, 72 m. Vao 7 taona izy dia efa nanao baolina kitra tamin’ireny fifaninana eny anivon’ny Fokontany ireny izy teny Andohatapenaka. Nisy olona nahita ny fomba filalaony dia nalainy hilalao tao amin’ny “Fc Dragon” tao Maurice izy ny tamin’ny 2003. Taorinan’io dia nalain’ny Ajesaia indray. Izany hoe nanomboka 2003 ka hatramin’ny 2004.
vendredi, 25 septembre 2015 12:53
Kitra anaty trano
Nosivanina ireo afaka hitana ny voninahitr’i Fosa Juniors Fc. Nanomboka ny alakamisy 24 Septambra teo no natao ny sivana, ho an’ireo mpilalao hahavita ny fiarovana ny voninahitr’i Fosa Juniors izay vao nahazo ny amboara tamin’ny Super League Uft. Nametraka tantara tsara, ny Fosa Junior Fc, mikasika ny kitra anaty trano, ka tsy maintsy atao izay iarovana izay voninahitra sy vokatra tsara izay.
Lalao Ravalomanana nibetroka ireo mpiasan'ny CUA
vendredi, 25 septembre 2015 12:21
Lalao Ravalomanana nitsidika sy nibetroka ny mpiasan'ny CUA
Na dia mbola nanakana ny hisian'ny famindram-pahefana aza ny ministeran'ny ati-tany, raha tsy vita ny fampiofanana sy ny fandaminana,dia nitsidika ny birao tao amin'ny Lapan'ny Tanàna ny Ben'ny Tanàna vaovao Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Tsikaritra tamin'izany fa dia nasika sy nibetroka ireo mpiasa tao sahady ity Ben'ny tanàna vaovao. Fampisehoana ve fa izy ny Patron vaovao sa efa izay izany no endrika asehony amin'ny fomba hifandraisany amin'ny mpiasa sy ny mponin'Antananarivo?
jeudi, 24 septembre 2015 23:19
Ampanefena – Vohémar: Ankizivavy 13 taona maty voaolana avy nijery rindran-kira
Tany ampikarohana ireo namany hiara-hody rehefa avy nijery fampisehoan’i Jior Shy tao amin’ny kianja “millennium” Ampanefena Atsimo ity zazavavy kely 13 taona no nifanehatra tamin’ny olon-dratsy, ny alin’ny talata hifoha ny alarobia 23 septambra tany Ampanefena Vohémar. Vatana mangatsiakan’ilay zaza, miboridana ny tapany ambany, no hitan’ny fianakaviany omaly tamin’ny 5ora maraina, tsy lavitra ny toerana nanaovana fampisehoana. Mahazatra any amin’iny Faritra SAVA iny rahateo ny mijery fampisehoana amin’ny andro alina, na dia efa itrangan-doza matetika aza izany, toy ny tao Sambava tamin’ny alahady teo, nandritra ny fampisehoan’i Jazz MMC, izay naharatrana olona maro rehefa raikitra ny rombo teo amin’ny samy mpijery. Tovolahy iray, 25 taona, efa malaza ratsy amin’ny fanendahana sy vaky trano arahina famonoana olona, no nahiana ho nahavanon-doza ka nosamborina avy hatrany omaly alarobia. Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilehio raha tsy nalaky tonga ny zandary. Natolotra ny Fitsarana any Antalaha izy io, ary notanana am-ponja avy hatrany. Androany no natao ny fandevenana ny nofomangatsiakan’ilay zazavavikely.